149 नयाँ कोभिड मामला- ‘एल्केम’ को मात्रै 143 जना - The Sikkim Chronicle
सिक्किममा 149वटा नयाँ कोभिड-19 मामला देखा परेको छ। यसमध्ये 143जना एल्केम फार्मा कम्पनी समर्दुङबाट रहेका छन्। यसै गरी स्विस् गार्नियर-रम्फूका2जना अनि जुभेन्टसबाट एकजना संक्रमित पाइएका छन्। यी सबैको जाँच आरटीपीसीआरद्वारा गरिएको जानकारी स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी भुटियाले गराएका हुन्। यसै गरी रम्फूमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टमा एकजना ग्रेफका चालक, एक सिक्किम फर्किएका व्यक्तिका […] The post 149 नयाँ कोभिड मामला- ‘एल्केम’ को मात्रै 143 जना appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
सिक्किममा 149वटा नयाँ कोभिड-19 मामला देखा परेको छ। यसमध्ये 143जना एल्केम फार्मा कम्पनी समर्दुङबाट रहेका छन्। यसै गरी स्विस् गार्नियर-रम्फूका2जना अनि जुभेन्टसबाट एकजना संक्रमित पाइएका छन्। यी सबैको जाँच आरटीपीसीआरद्वारा गरिएको जानकारी स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी भुटियाले गराएका हुन्।
यसै गरी रम्फूमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टमा एकजना ग्रेफका चालक, एक सिक्किम फर्किएका व्यक्तिका साथै एक जना ‘एटीएम क्यास् लोडर’ संक्रमित पाइएका हुन्। एटीएम क्यास् लोडरलाई रम्फूबाटै फर्काइयो भने अन्य दुईजनालाई हिमालयन फार्मेसी होस्टलमा पठाइएको बताइएको छ।
मणिपाल सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टमा एकजना फोर्ड कम्पनीकी महिला कर्मचारी संक्रमित पाइएकी छन्। सो महिला हालैमा गाड़ी कम्पनीहरुको एउटा सभामा सहभागी बनेकोले 14वटा वाहन शोरुमहरुलाई 72 घण्टाको निम्ति बन्द राखिएको छ। यस अवधिमा सबै शोरुमहरू सेनिटाइज गरिने साथै कसैमा लक्षण देखा परेमा कोभिड जाँच गरिने बताइएको छ। त्यसपछि सबै शोरूमहरु खोलिने भनिएको छ।
संक्रमण देखा परेसँगै कुम्रेकको जुभेन्टस परिसरलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएको छ।
24 घण्टाको अवधिमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक वृद्धि देखिएको 149 नयाँ मामलासँगै सिक्किममा अब सक्रिय मामला 456 रहेको छ भने 623जना निको भइसकेका छन्। अहिलेसम्म कोभिडको कारण 1एकजनाको मात्र ज्यान गएको छ।
स्मरण रहोस्, एल्केम फार्माका 29जना कर्मचारीहरु कम्पनी गेस्ट हाउसको क्वारेन्टाइबाट गत 10 अगस्तको दिन बाउन्ड्री वाल नाघेर भागेर राज्य बाहिर गएका थिए। यसबारे एल्केम कम्पनीले एफआइआर दर्ता गरेको छ। भगुवाहरु मध्ये प्राय: 50 प्रतिशतसँग कम्पनी प्रबन्धनको सम्पर्क भएको अनि सबै बिहारमा आ-आफ्नो घर पुगेको बताइएको छ। यसका साथै भगुवाहरुमा उत्तर प्रदेश अनि बंगालका पनि रहेका बताइएको छ। सिक्किमको स्वास्थ्य विभागले यी सबै राज्यहरुका सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरी ती भगुवा व्यक्तिहरुबारे जानकारी गराउने स्वास्थ्य सचिव डा भुटियाले गराएका छन्।
The post 149 नयाँ कोभिड मामला- ‘एल्केम’ को मात्रै 143 जना appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
admin Aug 31, 20200760
admin Jun 21, 20200541
admin Oct 2, 20200334
Shradha R. Chhetri Sep 26, 202002897
SC Bureau Jan 21, 20210338
SC Desk Jul 24, 20200286
admin Oct 4, 20200692